Du bist hier: Startseite / Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waayihii hore nin ayaa si xun ii...
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2018-03-23 12:17:262018-03-23 12:17:26Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waayihii hore nin ayaa si xun ii dhaawacay. Wuxuu iga qabtay lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonaynin in uu sidaasi ugu sameeyo. Inta baddan weli waan ka fikiraa. Hadda anigu waxaan leeyahay gabar saaxiibtayda ah. Sideen arintaasi ugala hadli karaa?